Uyisusa njani imo yokulinda yeTV 🥇 Isiphelo sendlela on 🥇
Abo bahlala bebukela umabonwakude ekhaya ngokuqinisekileyo baye baqaphela ukuba emva kwexesha elithile ngaphandle kokusebenza, umabonakude ucima ngokuzenzekelayo kwaye aye kwimowudi yokulinda, ngokungathi sicofe iqhosha elibomvu kurhulumente. Xa oku kusenzeka akufuneki sothuke kwaye sicinge ukuba umabonwakude wophukile: yinto eqhelekileyo yokuziphatha, yenzelwe abavelisi beTV ukonga umbane xa umabonwakude eshiywe ngaphandle kungekho namnye otshintsha iitshaneli okanye owenza nayiphi na imisebenzi ixesha elide (ngesiqhelo emva kweeyure ezi-2).
Ukuba asiyithandi le ndlela yokuziphatha okanye sifuna ukubukela umabonwakude ongapheliyo nokuba ngaphezulu kweeyure ezi-3, kwesi sikhokelo siza kukubonisa uyisusa njani imo yokulinda kwiTV zeemveliso ezinkulu zeTV, ke ngoko unokulawula kwangoko ukulinda okuzenzekelayo kwiimeko ezithile okanye kwiimeko ezithile apho kufuneka khona iTV rhoqo (umzekelo, umabonakude kwivenkile, umabonakude ogcina inkampani Umntu omdala okanye umntwana).
Ungayicima njani imo yokulinda kwiTV
Njengoko kukhankanyiwe kumboniso wangaphambili, indawo yokulinda ngokuzenzekelayo ibonelelwa kuzo zonke iiTV kunye neeTV ezikrelekrele ukwenza ukuba kube lula ukugcina amandla xa ushiyeke ixesha elide ngaphandle konxibelelwano. Nangona kunjalo, umenzi ngamnye unikezela ithuba lokuhlengahlengisa lo msebenzi (ukwandisa ixesha lokulinda) nangokuthi yicime ngokupheleleyo, ukuze ukonwabele umda weTV. Kwimeko yokugqibela, nangona kunjalo, kuyacetyiswa ukuba ukhumbule ukuyicima amaxesha ngamaxesha kunye nolawulo olukude, ukonga umbane kunye nokwandisa ubomi obuncedo besixhobo.
Susa i-LG TV kwimowudi yokulinda
Ukuba sine-LG smart TV sinokususa imo yokulinda ngokuzenzekelayo ngokucinezela iqhosha legear kulawulo olukude, kuyisa kwimenyu Zonke iisetingi, khetha imenyu ngokubanzi kwaye ekugqibeleni ucinezele kwinto leyo I-temporizador.
Kwiwindow entsha evulayo, siza kwenza into engu-A ingasebenzioff emva kweeyure ezi-2 Ukucinezela kuyo kwaye, ukuba sisete ixesha elithile lokuvala, sijonga kwimenyu Cima ixesha, Ukuqinisekisa ukuba into imiselwe Yenza ukungasebenzi. Ngenye indlela, sinokuqinisekisa nelizwi Imowudi ye-Eco (ekhoyo kwimenyu ngokubanzi) ukuba ilizwi liyasebenza Ukuvalwa ngokuzenzekelayo, ukuze uyicime.
Susa i-TV ye-Samsung kokubekwa eceleni
IiTV zeTV zithandwa kakhulu kwaye uninzi lwabasebenzisi ngokuqinisekileyo baya kuqaphela ubuncinci kube kanye kwimowudi yokulinda ngokuzenzekelayo isebenza. Ukuba uphakathi kwabo bafuna ukuyikhupha, sinokuqhubeka ngokucinezela iqhosha Imenyu zolawulo lweerimothi, ezisikhokelela ezantsi kwendlela Ngokubanzi -> uLawulo lweNkqubo -> Ixesha-> Ixesha lokulala kwaye ujonge ukuba ngaba izinto zoSeto zikhubazekile (kufuneka isetelwe kwiiyure ezi-2 ngokungagqibekanga: masitshintshe useto lube VULA).
Ukuba le ndlela ingasentla ayisebenzi, kufuneka siqwalasele ukuba ulawulo lokulinda luyafumaneka kusini na kuseto lokonga umbane. Ukuqhubeka sivula ifayile ye- Imenyumasiyingenise Isisombululo esiluhlaza okanye ngaphakathi Ngokubanzi -> Isisombululo sendalo kwaye ujonge ukuba ilizwi liyasebenza na Ukuvalwa ngokuzenzekelayo, ukuze ikhubazeke ngokusisigxina.
Beka i-TV ye-Sony ngaphandle kwemowudi yokulinda
IiTV zeSony zinokuba nenkqubo yokusebenza kunye neTV entsha ye-Android: zombini iinkqubo zigcina amandla kwaye ngokuzenzekelayo ziye kuma ekumeni emva kwexesha elithile ngaphandle kokufaka. Ukucima ukulinda iiTV zikamabonwakude ngaphandle kwe-Android TV, cofa nje iqhosha lasekhaya / leMenyu kulawulo olukude, masihambe Useto lweNkqubo -> Eco kwaye ujonge ukuba ukuma kweTV okungasebenziyo kuyasebenza, ukuze sikhubaze.
Ukuba sinomabonwakude wakwaSony one-Android TV, sicinezela iqhosha Casamasithathe indlela Useto -> Amandla -> Eco kwaye ucime imo yokulinda. Ukuba ayisebenzi okanye isikrini siyacima kwakhona emva kwexesha elithile kuya kufuneka siqwalasele ubumbeko lwe IphuphaInqaku le-Android elibonisa ukugcinwa kwescreen kwimeko yokungasebenzi ixesha elide. Ukuqhubeka, masithathe indlela Useto -> TV -> Ukuphupha kwaye uqiniseke ukuba ecaleni kwento leyo Xa ndikwimo yokulala ilizwi likhona Meyi.
Ezinye iiTV zeSmart smart zikwanaso nesenzwa sobukho, esibona ubukho babantu phambi kweTV kwaye, kwimeko yokujonga kakubi, ngokuzenzekelayo ibeka iTV kwimo yokulinda. Olu phawu lokwephuka komhlaba lusenokukhubazeka ngokucinezela iqhosha leMenyu, usithathe endleleni. Useto -> Useto lweNkqubo -> I-Eco -> Isenzi somboniso wobukho kwaye usete into ku VULA.
Susa iPhilips TV kokubekwe ecaleni
IiTV ze-Philips zinokubandakanya inkqubo yokusebenza okanye ye-Android TV, ke kuya kufuneka siqhubeke ngokwahlukileyo. Kulungiselelwe abo banePhilips TV ngaphandle kwe-Android TV, kunokwenzeka ukuba urhoxise imo yokulinda ngokucinezela iqhosha Imenyu / Ikhaya kulawulo olukude, uvula imenyu Amagqabantshintshi O ngokubanzi, ucinezela phezulu I-temporizador kwaye ekugqibeleni wavula umnyango Cima, apho kuya kufuneka siqwalasele umsebenzi ukuya VULA.
Ukuba iPhilips TV intsha, sinokususa imo yokulinda ngokucinezela iqhosha Imenyu, usikhokelele kwindlela Useto -> Eco Useto -> Ixesha lokulala kwaye usete ixesha 0 (unothi).
Susa iPanasonic TV kwimowudi yokulinda
Ukuba sinePanasonic TV ecima kuphela emva kwexesha elithile, sinokuyilungisa ngokucinezela iqhosha I-temporizador (ikhoyo kwiimodeli ezininzi zolawulo olude lwePanasonic) kwaye, kwimenyu entsha eza kuvula, konke ekufuneka sikwenzile kukwenza into ingasebenzi Bamba ngokuzenzekelayo.
Ngaba akukho qhosha lesibali xesha kulawulo lwe-Panasonic TV kude? Kule meko sinokususa ukulinda ngokulandela inkqubo yeklasikhi, equka ukucofa iqhosha Imenyu kulawulo olukude, vula imenyu yeXesha kwaye usetele uMbane oZenzekelayo ku VULA okanye yakhe 0 (unothi)
Ukuba ukulinda kweTV kuyasikhathaza ngelixa sibukele imovie emide elungileyo okanye ngexesha lesantya sokuzinkcinkca (oko kukuthi, xa sibukela iziqendu ezininzi zothotho lweTV ngokuqhubekekayo), ukukhubaza imo yokulinda kunokuba sisisombululo esisebenzayo. ke akufuneki ubambe irimothi. ubuncinci kanye ngeyure ukuze umabonakude "aqonde" ukuba sikhona kwaye sibukele into. Enkosi kwesi sikhokelo sinakho cima ukulinda kumabonwakude Yeempawu eziphambili, kodwa amanyathelo sikubonise wona ingadlalwa nakweyiphi na iTV yanamhlanje, Kuya kufuneka sithathe ulawulo olukude kuphela, faka useto kwaye ujonge into nganye ehambelana nokuvalwa okuzenzekelayo komabonwakude: Ukulinda, ukugcina amandla, i-Eco, i-Eco Mode okanye iTimer.
Iinkqubo ezininzi zokuma ziyatshintsha ngokuxhomekeke kwinkqubo yokusebenza efakiweyo; Ukuqonda kwangoko ukuba yeyiphi inkqubo esinayo ngaphambili kunye nendlela yokuqhubeka, sicebisa ukuba ufunde nezikhokelo zethu Uyazi njani ukuba yi-Smart TV mi Eyona Smart TV ye-Samsung, i-Sony kunye neNkqubo ye-LG App.
Ngaba sinengxaki kwimowudi yokulinda okanye ukucima iPC? Kule meko, sicebisa ukuba uyenze nzulu ingxoxo ngokufunda inqaku lethu. Ukurhoxiswa kunye nokuchitheka kwekhompyuter: umahluko kunye nokusebenziseka.